I-OnePlus 7 ayizukufumana isiqinisekiso se-IP kodwa i-OnePlus iyaqhayisa ngayo kwividiyo | I-Androidsis
Iziphelo ze-OnePlus zisinika ukusebenza okumnandi kunye nexabiso lemali, nangona kule minyaka idlulileyo, ixabiso layo belinyuka kancinci kancinci ukusukela njengoko besikubonisa iintsuku ezimbalwa ezidlulileyo, Ixabiso lokuqala le-OnePlus 7 Pro linokuqala kwi-euro ezingama-749 eYurophu.
Nangona kunjalo, zonke iimodeli ezivezwe yinkampani yaseAsia i-OnePlus kule minyaka idlulileyo ineziphene ezingazenzi ukuba zibe ziitheminali ezifanelekileyo kubo bonke abasebenzisi. Ukutshaja ngaphandle kwamacingo kunye nokuqinisekiswa kwe-IP yimizekelo emibini ecacileyo ngayo. Ngokubhekisele kokugqibela, inkampani ikwaqhayisa ngayo kwividiyo yayo yamva nje.
Kwiminyaka yakutshanje, impikiswano yokungasongezi isiqinisekiso se-IP, ngokwenkampani, yile inganyusa ixabiso lesiphelo malunga ne- $ 30. I-OnePlus ilayishe ividiyo entsha, ividiyo apho i-OnePlus 7 Pro iphoswe ebhakedeni lamanzi, isitsho ukuba i-terminal yayo ngaphandle kokunganiki siqinisekiso se-IP iyamelana nokuwela kwibhakethi lamanzi ...
Ukugqiba ukuhleka abasebenzisi, ezantsi kwevidiyo, inkampani isikhumbuza oko iwaranti yakho ayiwugubungeli umonakalo wamanzi. Umahluko kuphela phakathi kwesixhobo esinesiqinisekiso se-IP kunye nesinye, kukuba i-terminal ivavanywe phantsi kweemeko ezithile. Olu hlobo lovavanyo luqinisekisa ukuba siya kuba nakho ukusebenzisa i-terminal emvuleni, umzekelo, ngaphandle koloyiko lokulimaza.
Ngokwale vidiyo, kubonakala ngathi i-OnePlus ayiyiqondi ncam ukuba ithetha ngantoni. Bazama "ukwenza into elungileyo ngokusekwe kwinto efunekayo, hayi ishishini," babanga njalo. Kuyabonakala ukuba izatifikethi ze-IP zikho kwiitheminali ezininzi kuba umzi-mveliso ufuna, ayisiyiyo ngoba yimfuno okanye ngumnqweno wabasebenzisi.
Le ngxoxo ayifanele isimangalise, kuba Isizathu sokungafaki ukutshaja ngaphandle kwamacingo kukuba yinkqubo yokutshaja ecothayo. Masibone i-OnePlus, ebusuku, akukho mntu ufuna ukuba i-terminal yakhe ihlawulise kwimizuzu engama-30. Sinexesha elininzi ubusuku bonke ukuze ihlawuliswe, nangona icotha.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » I-OnePlus 7 ayizukufumana isiqinisekiso se-IP kodwa i-OnePlus iyaqhayisa ngayo kwividiyo